pre-လေ့ကျင့်ခန်းအာဟာရ: တစ်လေ့ကျင့်ခန်းမတိုင်မှီစားဖို့ဘာ – Health Deo
ကောင်းသောအစာအာဟာရသင့်ခန္ဓာကိုယ်ပိုကောင်းလုပ်ဆောင်ကူညီခြင်းနှင့်အသီးအသီးယလေ့ကျင့်ခန်းအပြီးပိုမိုမြန်ဆန် recover လို့ရပါတယ်။
ကြိုတင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးအာဟာရစားသုံးမှုသင်သည်သင်၏စွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံးကိုကူညီဒါပေမယ့်လည်းကြွက်သားပျက်စီးမှုကို minimize လိမ့်မယ်မသာ။
ဒီနေရာတွင် Pre-ယလေ့ကျင့်ခန်းအစာအာဟာရနှင့် ပတ်သက်. သိရန်လိုအပ်သမျှဖြစ်ပါသည်
တစ်ခုချင်းစီကို macronutrient တစ်ဦးယလေ့ကျင့်ခန်းရှေ့မှာမတိကျတဲ့အခန်းကဏ္ဍရှိပါတယ်။ သို့သော်သင်သည်ထိုသူတို့စားသုံးဖို့လိုအပ်သည့်အတွက်အချိုးလေ့ကျင့်ခန်းများ၏တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အမျိုးအစားအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။
အောက်တွင်တစ်ဦးချင်းစီ macronutrient ၏အခန်းကဏ္ဍကိုမှာအကျဉ်းကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ကြွက်သားလောင်စာများအတွက် carbs ကနေဂလူးကို့စကိုအသုံးပြုပါ။
Glycogen အဓိကအားဖြင့်အသည်းနဲ့ကြွက်သားတွေအတွက်ခန္ဓာကိုယ်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်စတိုးဆိုင်များ glucose လမ်းဖြစ်၏။
ရေတိုနှင့်မြင့်မားသောပြင်းထန်မှုလေ့ကျင့်ခန်းများအတွက်, သင့် glycogen စတိုးဆိုင်များစွမ်းအင်သင့်ရဲ့ကြွက်သား ” အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်ကြသည်။
သို့သော်ကြာကြာလေ့ကျင့်ခန်းများအတွက်, carbs အသုံးပြုကြသည်ပေးသောဖို့ဒီဂရီအများအပြားအချက်များပေါ်တွင်မူတည်ပါသည်။ ဤပြင်းထန်မှု, သင်တန်းအမျိုးအစားနှင့်သင့်ခြုံငုံအစားအသောက်များတွင်ပါဝင်သည်။
သင့်ရဲ့ကြွက်သား ” glycogen စတိုးဆိုင်များန့်အသတ်ရှိပါတယ်။ ဤအစတိုးဆိုင်များကုန်ခမ်းဖြစ်လာအတိုင်း, သင်တို့၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပြင်းထန်မှုလျော့။
လေ့လာရေးတသမတ်တည်းလေ့ကျင့်ခန်းအတွင်းမှာ carb ဓာတ်တိုးမြှင့်တင်နေချိန်တွင် carbs glycogen စတိုးဆိုင်များနှင့်အသုံးချတိုးမြှင့်နိုင်သည်ကိုပြသခဲ့ကြသည်။
1-7 နေ့ရက်ကာလအဘို့ high-carb အစားအစာစားသုံးကပါဝင်ပတ်သက်ရသော Carb တင်, glycogen စတိုးဆိုင်များတိုးမြှင့်ဖို့တစ်လူသိများတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ကြိုတင်လေ့ကျင့်ခန်းမှပရိုတိန်း (တစ်ဦးတည်းသို့မဟုတ် carbs နှင့်အတူ) အစာစားခြင်းကြွက်သားပရိုတိန်းပေါင်းစပ်တိုးမြှင့်ပြသလျက်ရှိသည်။
သင်တန်းသားများကိုလေ့ကျင့်ခန်းမတိုင်မှီ whey ပရိုတိန်း၏ 20 ဂရမ်စားသုံးပြီးနောက်တစ်ဦးကလေ့လာမှုအပြုသဘောဟိုတုန့်ပြန်ပြသခဲ့သည်။
glycogen လေ့ကျင့်ခန်း၏ရေတိုနှင့်မြင့်မားသောပြင်းထန်မှုအကြိမ်ကြိမ်အသုံးပြုသည်နေစဉ်, အဆီပိုရှည်များနှင့်အလယ်အလတ်-to-Low-ပြင်းထန်မှုလေ့ကျင့်ခန်းများအတွက်လောင်စာဆီအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်
အချို့လေ့လာမှုများအားကစားစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်အဆီစားသုံးမှု၏သက်ရောက်မှုများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပါပွီ။ သို့သော်ဤလေ့လာမှုများက high-အဆီတစ်ရှည်လျားသောကာလကိုကျော်အစားအစာထက်လေ့ကျင့်ခန်းမှကြိုတင်မှာကြည့်ရှုကြ၏။
ဥပမာအားဖြင့်, တဦးတည်းလေ့လာမှု 40% အဆီပါဝင်သည်ဟုလေးရက်သတ္တပတ်အစားအသောက်များတွင်ကျန်းမာ, လေ့ကျင့်သင်ကြားပြေးသမားအတွက်ခံနိုင်ရည် running ကြိမ်တိုးမြှင့်ကိုဘယ်လို။ ပြသ
Carbs အဆီပိုရှည်, လျော့နည်းပြင်းထန်သောလေ့ကျင့်ခန်းအဘို့သင့်ခန္ဓာကိုယ်လောင်စာကူညီပေးသည်စဉ်က high-ပြင်းထန်မှုလေ့ကျင့်ခန်းများအတွက် glycogen စတိုးဆိုင်များတိုးမြှင့်ကူညီပေးသည်။ ဤအတောအတွင်းပရိုတိန်းကြွက်သားပရိုတိန်းပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်အကူအညီအထောက်အပံ့များကိုပြန်လည်နာလန်ထူပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။
သင့်ရဲ့ Pre-လေ့ကျင့်ခန်းအစားအစာများ၏ Timing Key ကို Is
သင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ရေး၏ရလဒ်များကိုတိုးမြှင့်ဖို့, ပရိုတိန်းနှင့်အဆီ 2-3 နာရီသင်သည်လေ့ကျင့်ခန်းမတိုင်မီ carbs င်တစ်ဦးပြီးပြည့်စုံသောမုန့်ညက်ကိုစားကြိုးစားပါ။
သို့သော်အချို့ကိစ္စများတွင်, သင် 2-3 နာရီထွက်အလုပ်လုပ်ရှေ့တော်၌အပြည့်အဝန့်ညက်ရနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ထိုကိစ္စတွင်, ထို့နောက်သင်ဆဲတစ်လျောက်ပတ်သော Pre-ယလေ့ကျင့်ခန်းသည်ဘောဇဉ်ကိုစားနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သင်သည်သင်၏လေ့ကျင့်ခန်းရှေ့မှာစား, အသေးငယ်နှင့်ရိုးရှင်းတဲ့ဘောဇဉ်ဖြစ်သင့်ကြောင်းစိတ်တွင်စောင့်ရှောက်လော့။
သငျသညျကြိုတင်သင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမှ 45-60 မိနစ်ခန့်အစာကိုစားပါက, အဓိကအားဖြင့် carbs နှင့်အချို့သောပရိုတိန်းတွေဟာအစာကြေခြင်းနှင့်မဆံ့ဖို့ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ကြောင်းအစားအစာများကိုရွေးချယ်ပါ။
ဒါဟာ 2-3 နာရီသင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းရှေ့တော်၌အပြည့်အဝန့်ညက်ကိုစားသုံးဖို့အကြံပြုပါတယ်။ သင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမှပိုမိုနီးကပ်စွာကိုစားအစားအစာများအဘို့, ရိုးရှင်းတဲ့ carbs နှင့်အချို့သောပရိုတိန်းကိုရွေးချယ်ပါ။
လက်မ၏ A ကောင်းဆုံးအုပ်ချုပ်မှုကိုလေ့ကျင့်ခန်းမှကြိုတင် carbs နှင့်ပရိုတိန်းဓာတ်အရောအနှောကိုစားရန်ဖြစ်ပါသည်။
သင်သည်သင်၏ Pre-ယလေ့ကျင့်ခန်းမုန့်ညက်နှင့်အတူဆီဥကို စား. လျှင်, ကနာရီအနည်းငယ်ကသင်၏လေ့ကျင့်ခန်းမတိုင်မှီအနည်းဆုံးစားသုံးရပါမည်။
သင်၏အလေ့ကျင့်ခန်း 2-3 နာရီသို့မဟုတ်ပိုအတွင်းမှာပဲစတင်ပါလျှင်
ကြက်ဥ omelets နှင့်မြေတပြင်လုံး-စပါးကိုဆန္ဒပြုထောပတ်သီးပြန့်ပွားခြင်းနှင့်အသီးတစ်ခွက်နှင့်အတူထိပ်ဆုံး
မြေတပြင်လုံး-စပါးကိုပေါင်မုန့်, ပိန်ပရိုတိန်းနှင့်တစ်ဦးအခြမ်းသုပ်အပေါ် Sandwich က
သင်၏အလေ့ကျင့်ခန်း2နာရီအတွင်းမှာပဲစတင်ပါလျှင်
နို့, ပရိုတိန်းအမှုန့်, ငှက်ပျောသီးများနှင့်ရောထွေးသီးဖြင့်လုပ်သောပရိုတိန်းဖျော်ရည်
သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောအချိန်များတွင်အများအပြား Pre-ယလေ့ကျင့်ခန်းအစားအစာများကိုစားရန်မလိုအပ်ပါကစိတ်ထားပါ။ ရုံဤအရာတစျခုကိုရွေးချယ်ပါ။
carbs နှင့်ပရိုတိန်းဓာတ်၏တစ်ဦးကပေါင်းစပ် Pre-ယလေ့ကျင့်ခန်းအစားအစာများရန်အကြံပြုသည်။ အဆီလည်းအကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကအနည်းဆုံးနှစ်နာရီလေ့ကျင့်ခန်းမတိုင်မှီကိုလောင်ရပါမည်။
ဖြည့်စွက်ဒါ့အပြင်လေ့ကျင့်ခန်းမတိုင်မှီအသုံးဝင်သော Be နိုင်သလား
ဖြည့်စွက်အသုံးပြုမှုအားကစားအတွက်ဘုံဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားထုတ်ကုန်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန်အစွမ်းသတ္တိကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်, ပိန်ခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုလျှော့ချစေနိုင်သည်။
ဒါဟာပင်ပန်းနွမ်းနယ် delay လုပ်ခြင်းအားလုံးနေစဉ်, ကြွက်သားထုထည်, ကြွက်သားအမျှင်အရွယ်အစားနှင့်ကြွက်သားခွန်အားနှင့်ပါဝါတိုးမြှင့်ပြသလျက်ရှိသည်။
တကယလေ့ကျင့်ခန်းမတိုင်မှီ Creatine သည်ယူအကျိုးရှိသောင်သော်လည်း, တကယလေ့ကျင့်ခန်းအပြီးခေါ်ဆောင်သွားသည့်အခါ ပို. ပင်ထိရောက်သောဖြစ်ဟန်ရှိသည်။
တစ်နေ့လျှင် Creatine သည် monohydrate ၏ 2-5 ဂရမ်ကိုယူပြီးထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။
တခြားအကျိုးခံစားခွင့်များထဲတွင်ဖိန်း, စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ကောင်းမွန်တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိနှင့်အာဏာကိုတိုးမြှင့်, ပင်ပန်းနွမ်းနယ်၏ခံစားချက်များကိုလျှော့ချရန်နှင့်အဆီလောင်ကျွမ်းမှုကိုလှုံ့ဆော်ကိုကူညီပြသလျက်ရှိသည်။
ကဖိန်းဓာတ်ကော်ဖီ, လက်ဖက်ရည်နှင့်စွမ်းအင်ဖြည့်အချိုရည်ထဲမှာကိုလောင်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်း Pre-ယလေ့ကျင့်ခန်းဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်ဆေးပြားတှငျတှေ့နိုငျပါသညျ။
ဖိန်းရဲ့အထွတ်အထိပ်သက်ရောက်မှုမိနစ် 90 စားသုံးမှုပြီးနောက်မြင်ကြသည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ကြိုတင်လေ့ကျင့်ခန်းမှ 15-60 မိနစ်မျိုချမိလျှင်ပင်ထိရောက်သောဖြစ်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
branched-Chain အမိုင်နိုအက်ဆစ် (BCAAs)
BCAAs ဟာမရှိမဖြစ်အမိုင်နိုအက်ဆစ် valine, leucine နှင့် isoleucine ရည်ညွှန်း။
လေ့လာရေးလေ့ကျင့်ခန်းမတိုင်မှီ BCAAs ယူပြီးကြွက်သားပျက်စီးမှုကိုလျော့ချခြင်းနှင့်ကြွက်သားပရိုတိန်းပေါင်းစပ်တိုးမြှင့်ကူညီပေးသည်ကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။
5 ဂရမ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို၏တစ်ဦးကထိုးအနည်းဆုံးတစ်နာရီကြိုတင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့, ထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။
beta-alanine carnosine သင့်ရဲ့ကြွက်သားစတိုးဆိုင်များတိုးပွါးကြောင်းတစ်ခုအမိုင်နိုအက်ဆစ်သည်။ ဒါဟာရေတိုနှင့်မြင့်မားသောပြင်းထန်မှုလေ့ကျင့်ခန်းများအတွက်အထိရောက်ဆုံးဖြစ်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါအကြံပြုနေ့စဉ်ထိုးကအနည်းဆုံး 0.5 ဂရမ်မီသင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမှကိုလောင်ရပါမည်သည့် 2-5 ဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကဖိန်းဓာတ်, Creatine သည်, beta-alanine, branched-ကွင်းဆက်အမိုင်နိုအက်ဆစ်, မိုင်နိုအက်စစ်နှင့် B ဗီတာမင်ထိုထုတ်ကုန်များတွင်အသုံးအများဆုံးပါဝင်ပစ္စည်းများအကြားရှိပါတယ်။
ဤရွေ့ကား Pre-ယလေ့ကျင့်ခန်းဖြည့်စွက်အလုပ် output ကို, အစွမ်းသတ္တိကိုခံနိုင်ရည်, အောက်ဆီဂျင်မဲ့ချေပါဝါ, တုံ့ပြန်မှုအချိန်, အာရုံနှင့်ရွှင်လန်းတိုးမြှင့်ပြသခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါအထူးသဖြင့်ထိုးထုတ်ကုန်အပေါ်မူတည်ပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်အကြောင်းကို 30-45 မိနစ်ခန့်လေ့ကျင့်ခန်းမတိုင်မှီကသူတို့ကိုယူဖို့အကြံပြုပါတယ်။
Creatine သည်ကဖိန်းဓာတ်, BCAAs နှင့် beta ကို-alanine မကြာခဏယလေ့ကျင့်ခန်းမတိုင်မီအကြံပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ multi-ပစ္စည်း Pre-ယလေ့ကျင့်ခန်းဖြည့်စွက်အကောင်းဆုံးအကျိုးကျေးဇူးများကိုများအတွက်အများကြီးကွဲပြားခြားနားသောပါဝင်ပစ္စည်းများပေါင်းစပ်။
သင့်ခန္ဓာကိုယ် function ကိုရေလိုအပ်ပါတယ်။
ဒါဟာလေ့ကျင့်ခန်းမတိုင်မှီရေနှင့်ဆိုဒီယမ်နှစ်ဦးစလုံးလောင်ဖို့အကြံပြုပါတယ်။ ဒါဟာအရည်ချိန်ခွင်လျှာ (32, 33) တိုးတက်စေပါလိမ့်မယ်။
အားကစားဆိုင်ရာဆေးပညာ၏အမေရိကန်ကောလိပ် (ACSM) 32 (10-15 မိနစ်ခန့်လေ့ကျင့်ခန်းမတိုင်မှီအနည်းဆုံးရေစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့် 8-12 အောင်စမတိုင်မီလေးနာရီ (0.23-0.35 လီတာ) ရေ 16-20 အောင်စ (0.5-0.6 လီတာ) ကိုသောက်သုံးအကြံပြု ) ။
ထို့အပြင်သူတို့အရည်များ (32) ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်ကူညီရန်ဆိုဒီယမ်ပါဝင်သည်တဲ့အဖျော်ယမကာစားသုံးဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပူးတွဲတင်ပြထားခြင်းနှင့်အမြန်ဆုံးရလဒ်များကိုရတဲ့နှင့်အတူအစဉ်အဆက်ထက် ပို. စိုးရိမ်ပူပန်ကြသည်။ ထိရောက်သောလေ့ကျင့်ခန်းသင့်လျော်သောကြိုတင်နဲ့ post ယလေ့ကျင့်ခန်းအစာအာဟာရလိုအပ်သည်။ အရည်အသွေးနှင့်ပရိုတိန်းဓာတ်၏အကောင်းဆုံးသတင်းရင်းမြစ်ရွေးချယ်ရာတွင်နှင့်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်ကိုအာရုံစိုက်, ဒါပေမယ့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့, သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဦးစားပေးကိုက်ညီပါတဲ့အစားအစာကိုရွေးချယ်ပါ။ အတိအကျကိုကျော်အလေးပေးမနေပါနဲ့ဒါကြောင့်ရှုပ်ထွေးစေဘူး! သင့်ရဲ့အစားအစာနှင့်ပျော်ရွှင်လေ့ကျင့်ရေးခံစားကြည့်ပါ!